Banyere Plucial, Inc
Company Ama / Ndi ana-akpo
Iji mee ngwangwa ndị ụwa ọnụ nke ụwa na a multi-asụsụ + ígwé ojii technology
Plucial bụ, dị ka aghọ ndị ọzọ maara n'uwa niile n'ihi na ihe niile ụlọ ọrụ na gburugburu ụwa, awade a multi-asụsụ ngwọta mepụtara ya.
Gịnị mere anyị multi-asụsụ ngwọta bụ họọrọ.
(Machine translation + mmadụ translation)
0 Mba &amp; Obodo
(To ọrụ ndị ahịa bụ ụwa ọnụ ọgụgụ)
banyere 0 %
(Na-akwado Internet ọrụ gburugburu ụwa)
banyere 0 ijeri mmadụ
(Mmeri nwere ahịa si n'akụkụ nile nke ụwa)
Ngwaahịa na anyị ugbu a nwere na-enye
GuidebooQ bụ ọrụ na-nwere ike ime ka naanị 10 nkeji a multi-asụsụ ibe weebụ nke ọ bụla ntụpọ gburugburu ụwa. Ị nwere ike chọọ na asụsụ ha, ma na-enye a ọzọ ojuju njem ebe ọmụma ndị njem gburugburu ụwa.
91 dị iche iche asụsụ
Oke na Nchikota asusu a free
Simple translation usoro
The translation zuru ezu na naanị 3 nzọụkwụ
Ànyị nwere ike ịgbanwe ọdịnaya na-egosipụta maka ọ bụla asụsụ
SEO nke ọ bụla asụsụ
All asụsụ kachasị nke search engine
Ezigbo dị ka a multi-asụsụ menu
nka enweghị isi
Dị nnọọ ka a oke a dị mfe input
GuidebooQ bipụtala naanị ugbu a Japanese version,
njikere na-ebipụta n'otu oge ụwa 200 mba na mpaghara na-mere ugbua.
Ọ bụghị nanị na nke kwekọrọ ekwekọ nke mba ọzọ ndị njem, ga-now-eguzosi ike ruo gị niile ọrụ kwupụta ịga mba ọzọ.
Na mgbakwunye na-agbakwụnye nanị atọ ụdị nkè ka HTML, na-agbanwe ka multi n'Ịntanet n'asụsụ ebe HTML kwekọrọ na 91 asụsụ.
Ọ bụrụ na ihe ọmụma nke HTML na CSS i nwere enwe, ị nwere ike chọrọ multi-asụsụ ngwọta na-now ahịa With MulCMS.
Ọbụna na-enweghị inye mmalite n'etiti
Iji na-aghọta a ụwa ọnụ ọgụgụ ụwa ọnụ bụ ezughị naanị anyị ike. The ụlọ ọrụ na-ịhụ na-aghọta a zuru ụwa ọnụ otu na anyị n'ọdịnihu, anyị ga-enye ígwé ojii ngwugwu MulCMS na ị nwere ike mfe iji anyị multi-asụsụ na ígwé ojii technology.
Server enweghị isi
Iji na-eji ndị Google Ígwé ojii Platform, ihe ọmụma adịghị chọrọ na ihe nile banyere ihe nkesa na akụrụngwa.
Mpụga data nsụgharị
Auto Insert ihe kwesịrị ekwesị ọdịnaya gaa na HTML-eji CSS selector.
Kpọtụrụ bụkwa multi-lingual
Iji chọpụta ase isi iyi nke asụsụ, ikike gwa gị site na e-mail site n'ịsụgharị odide mbụ bụ a ọkọlọtọ atụmatụ.
Japan Fukuoka, Hakata-Ku, Fukuoka City Hakataekihigashi 1-12-17 ụlọ ọrụ New Gaea Hakata Station 3F
Onya GuidebooQ na ike ga-kere naanị 10 nkeji na 91 asụsụ dị iche iche nke WEB akwụkwọ ntuziaka na-Japan nke obodo azụmahịa nwe maka
Gụnyere onye ọ bụla nọ mmalite-isi na ndi oru nta akuko, anyị na-eche ka ase site a dịgasị iche iche nke ndị mmadụ.
Saịtị a bụ dakọtara na 91 asụsụ.